Pitso: UCastro kumele akhohlwe yi-'CBD’ | News24
Ferial Haffajee: Middle classes pay for the years of rot
Finance Minister Tito Mboweni’s Budget for 2019 is toughest on the middle-class, which pays the largest part of the cost of state capture, says Ferial Haffajee.
Pitso: UCastro kumele akhohlwe yi-'CBD’
Cape Town – Umqeqeshi weMamelodi Sundowns, uPitso Mosimane, usephonsele inselelo umdlali waleli qembu, uLeonardo Castro, ukuthi abuyise ifomu yakhe ngaphandle kokuthi alekelelwe ngozakwabo, uKhama Billiat kanye noKeagan Dolly.
Ngesizini edlule laba badlali abathathu babevutha bengabaselwe futhi bethathwa njengabayingozi kakhulu eChloorkop nokwaholela ekutheni baze baqanjwe igama elithi "CBD" – nokuyigama elisuselwa emagameni abo - uCastro, uBilliat kanye noDolly.
Kodwa-ke izinto sezishintshile kule sizini njengoba uDolly esalishiya leli qembu wayojoyina iMontpellier yaseFrance ekubeni ngakolunye uhlangothi uBilliat yena ubelokhu engadlali ngenxa yokulimala. UCastro naye usekuthola kunzima ukuqala umdlalo ngenxa yezinkinga zakhe zokulimala.
OLUNYE UDABA: Indinda ngozoba umqeqeshi omusha weBafana
Ngemuva kokuvalela enethini amagoli angu-10 emidlalweni yeligi ngesizini edlule, lo mdlalo ongowokudabuka eColombia usaqale imidlalo emibili kuphela yeligi kanti akakalishayi igoli.
Kodwa-ke ngoMsombuluko kusihlwa uzibonakalisile ukuthi akakathunti njengoba ebhakuzise inethi ngesikhathi leli qembu litholene phezulu neMariveni United kumqhudelwano weNedbank Cup.
Ngokusho kukaMosimane, lo mdlali uzibonakalisile nangesikhathi iSundowns ibhekene neCape Town City.
UMosimane uthi kwaba yinto enzima ukuhlakazeka kwe"CBD", wathi kodwa uCastro kuzomele avuke azithathe.
“Ulinde ithuba lakhe futhi kukuyena ukuthi azibuyisele eqenjini futhi angakwazi ukubuyela eqenjini, akakwazi ukukhononda ngabantu abangekho enkundleni.
“Kumele abhekane nakho, kuyingxenye yebhola, uma ngabe uMessi engekho, uSuarez akumele akhononde noma uNeymar.”